လေထိုးရုပ် (ရုပ်ရှင်) - ဝီကီပီးဒီးယား
ဟီရိုကာဇူ ကိုရီအီဒါ ရိုက်ကူးသော ၂၀၀၉ ထုတ် ရုပ်ရှင်
လေထိုးရုပ် (ဂျပန်: 空気人形) သည် ၂၀၀၉-ထုတ် ဂျပန် အချစ်ဇာတ်ကား ဖြစ်ပြီး ဟီရိုကာဇူ ကိုရီအီဒါ ရိုက်ကူးသည်။ ရိုရှီအိ ဂိုဒါရေးသည့် ရုပ်ပြကို ဇာတ်လမ်းတည် ရိုက်သည်။ အသိစိတ်ဝင်သွားသည့် လေထိုးရုပ်၏အချစ်ကို ရိုက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ (၆၂) ကြိမ်မြောက် ကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် ဗွေဆော်ဦး ပြသခဲ့သည်။ ဂျပန်၌ ရုံတင်သည့်အချိန်မှာ စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်တွင် ဖြစ်သည်။
ဟီရိုကာဇူ ကိုရီအီဒါ (ဇာတ်ညွှန်း)
ရိုရှီအိ ဂိုဒါ (မူရင်း ရုပ်ပြ)
၁၄ မေ ၂၀၀၉ (၂၀၀၉-၀၅-၁၄)
သက်လတ်ပိုင်း ဟီဒယ်ရိုသည် လေသွင်းရသည့် လိပ်ဖျော်ဖြေရုပ်နှင့် နေသည်။ ထိုအရုပ်ကို နိုဇိုမီဟု အမည်ပေးထားသည်။ သူ၏ အရင်းနှီးဆုံး အဖော်ဖြစ်သည်။ အဝတ် ဆင်ပေးသည်။ စားပွဲနား ခေါ်ထားသည်။ လမ်းထွက်လျှင် ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ပေါ်တင်ကာ တွန်းသွားသည်။ ညဘက်၌ အတူအိပ်သည်။
ဟီဒယ်ရို အလုပ်သွားခိုက် နိုဇိုမီ အသက်ဝင်လာသည်။ အဝတ်ဝတ်ကာ လောကကြီးအား စူးစမ်းရန် ထွက်သည်။ ထိုသို့ မကြာမကြာထွက်ရင်း ခွေအငှားဆိုင်တွင် အလုပ်ရကာ ဂျူနီချီ အမည်ရှိ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးနှင့် ချစ်ကျွမ်းဝင်သည်။ တစ်ခါသော် အချွန်နှင့်ထိုးမိကာ လေလျော့ပြားချပ်သွားသည်။ ဂျူနီချီက ပြဲရာကို တိတ်နှင့်ကပ်ကာ လေပြန်သွင်းပေးသည်။
တစ်နေ့သော် ဟီဒယ်ရို ခွေဆိုင်ရောက်လာရာ နိုဇိုမီနှင့် ပက်ပင်းတိုးသည်။ နိုဇိုမီက ကြောက်နေသော်လည်း ဟီဒယ်ရို မမှတ်မိ။ မလုံမလဲဖြစ်နေသည့် နိုဇိုမီအား အလုပ်ရှင်က ဂျူနီချီနှင့် တိုင်တန်းမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်နှင့် နှုတ်ပိတ်လိုက်ရသည်။ အိမ်ပြန်ရောက်သော် ဟီဒယ်ရိုက နိုဇိုမီမှာ အရုပ်မဟုတ်ကြောင်း သိသွားသည်။ လူလူချင်းဆက်ဆံရေးကို မနှစ်မြို့သော ဟီဒယ်ရိုက နိုဇိုမီအား အရုပ်အဖြစ်သာနေရန် တောင်းဆိုသည်။ အသက်မဲ့ခြင်းကို မကြိုက်တော့သော နိုဇိုမီက အိမ်မှ ထွက်ပြေးသည်။
စက်ရုံသို့ ရောက်သွားရာ အရုပ်ထုတ်သူနှင့် တွေ့သည်။ ထိုသူက အရုပ်တိုင်းတွင် နှလုံးသားရှိကြောင်း၊ ရုံသို့ ပြန်ရောက်လာလျှင် မျက်နှာကိုကြည့်ကာ မည်သို့ခံစားလာရသည်ကို ပြောပြနိုင်ကြောင်း ဆိုသည်။ သုံးပြီးသားအရုပ်၏ဘဝကို မေးရာ အမှိုက်ပုံးတွင် လမ်းဆုံးရကြောင်း ရှင်းပြသည်။
နိုဇိုမီက ဂျူနီချီအား သူ့သဘောကျ နေမည်ဟု ခယသည်။ ဂျူနီချီက ခွေအငှားဆိုင်၌ ယခင်က လုပ်ဖူးသကဲ့သို့ လေထုတ်လေသွင်းပြုလိုကြောင်း တောင်းဆိုသည်။ ကိစ္စပြီး၍ အိပ်ရာဝင်ချိန်၌ ဂျူနီချီကိုလည်း သူ့နည်းတူ လေထုတ်လေသွင်း ပြုလိုလာသည်။ ဂျူနီချီ၌ လေပေါက် ရှာမတွေ့။ သို့ဖြစ်ရာ ကတ်ကြေးနှင့် ဗိုက်ကိုဖွင့်သည်။ ထွက်လာသည့် သွေးတို့ကို တိတ်နှင့် ပိတ်သည်။ ပါးစပ်မှ လေသွင်းသည်။ သို့သော်လည်း ဂျူနီချီမှာ အသက်လည်မလာတော့။ အသေကိုယ်ကို အမှိုက်ပုံသို့ နိုဇိုမီ သွားပစ်သည်။ အသည်းကွဲနေသည့် နိုဇိုမီမှာ သူ့၌ကပ်ထားသော အကွဲဟောင်းမှ တိတ်ကိုခွာကာ လေထုတ်ပြီး အမှိုက်ပုံလမ်းသို့ မြန်းတော့သည်။
နိုဇိုမီ အဖြစ် ဘေဒူးနာ (Bae Doona)
ဂျူနီချီ အဖြစ် အရတာ (Arata)
ဟီဒယ်ရို အဖြစ် အီဆုဂျီ အီတာရို (Itsuji Itao)
ဆိုနိုဒါ (အရုပ်လုပ်သူ) အဖြစ် ဂျိုး အိုဒါဂီရီ (Joe Odagiri)
၂၀၁၀ ခု၊ မတ်လ ၂၆ ရက်တွင် ဂျပန်၌ ပုံမှန်နှင့် ကန့်သတ်ထုတ်ဟူ၍ နှစ်စားဖြန့်သည်။ နှစ်စားစလုံးတွင် အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုး ပါသည်။
↑ "Air Doll". Boxofficemojo. Retrieved March 04, 2012.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လေထိုးရုပ်_(ရုပ်ရှင်)&oldid=453991" မှ ရယူရန်
၂၀ မတ် ၂၀၁၉၊ ၀၉:၁၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ မတ် ၂၀၁၉၊ ၀၉:၁၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။